Semalt About Rosiana Fiteny Spam
Ny tetikadin-tsiansa momba ny spamming dia efa nandritra ny fotoana fohy. Ilaina ny fampiasana teknolojia mainty SEO hahazoana antoka fa misy tranokala hita taratra ao amin'ny Google Analytics ho an'ny tranonkala hafa. Ny rohy referrer dia fitaovana iray izay manisy mpampiasa aterineto mankany amin'ny tranonkalan'ny referrer. Ity teknika ity dia nahazo tombontsoa tamin'ny Reddit sy HackerNews.
Ivan Konovalov, manam-pahaizana Semalt , dia nilaza fa ny fampiasana ny rohy referrer dia azo antoka fa tonga amin'ny ambaratonga hafa noho ny ezaka nataon'i Vitaly A. Popov - tompon'ny tranonkala spam online darodar.com. Ny tranonkalany dia manararaotra ny code identifeter string Google Analytics izay mamela azy hamoaka ny famantarana misy rehetra ampiasaina indray mandeha. Raha sendra misy pejy misy tsindrona ny mpizara analômatika iray mitovy amin'ilay ampiasainao dia misaintsaina ao amin'ny statistika ao amin'ny tranonkala. Mampihomehy, tsy mila mahafantatra ny URL -nao ianao raha tezitra amin'ny vohikalanao. Izay tena ilan'ny spammers dia ny manantona na manaparitaka ny mombamomba ny fanadihadiana ao amin'ny pejiny.
Andeha isika hiverina amin'ny spamofana Rosiana, i Popov dia nametra-panontaniana tamin'ny fomba mahatsiravina io fomba fiasa io. Ny sidina tokana amin'ny rohy rehetra misy spam dia mamindra anao amin'ny tranonkala toy ny Amazon, eBay na AliExpress. Ity dia manamora ny rohin'ny orinasam-pandraharahana antsoina hoe IloveVitaly.com ary navoaka tamin'ny tranonkalany. Ahoana no hahazoany vola amin'izany? Eny ary, tsy hanangom-bola izy raha tsindrio amin'ny redirect rohy tsy mividy avy amin'ny tranonkala vokatra. Na izany aza, rehefa mividy amin'ny hoavy ianao, Atoa..Ny Popov amin'ny tranokalan'ny Vitality dia hahazo ny komisiona momba ny varotrao.
Ankoatra izany, Mr. Popov dia mikendry sy manome ny tompon'ny tranonkala izay manana fahafahana bebe kokoa hividy tsy tapaka. Raha vao mandray ny cookie suivantanao ianao, dia voafehin'ny fiainana. Ny statistika avy amin'ny SimilarWeb dia manintona mpitsidika maherin'ny iray tapitrisa isam-bolana i Darodar.com.
Nanampy trotraka vaovao momba ny fanao ratsy nataony i Popov vao namoaka tranonkala vaovao antsoina hoe thehulfingtonpost.com. Ao amin'io trosa io dia mahita ny tranonkalan'ny mpikarakara webmaster na administrateur iray amin'ny sehatr'asa fanadihadiana ary manamarina avy hatrany ny fanamarihana azy ireo ao amin'ny Huffington Post. Mampihomehy, i Mr. Popov dia tsy maintsy ateraky ny programa rehetra ampiasainy. Hatramin'ny mbola miteraka fifamoivoizana izy, na dia ny paikady manohitra ny spam aza dia tsy afaka hanasazy azy satria izy ireo ihany no mandrakitra ny fanentanana ara-barotra amin'ny mailaka araka ny voalazan'ny fepetra sy fepetra.
Na izany aza dia misy ny mety hahatonga ny fijerena amin'ny ho avy ny fampiharana azy amin'ny ho avy mba hampitsahatra ny fifanarahana iombonana. Amin'ny hoavy, ny Huffington Post dia mety hampiasa vola amin'ny ady ara-dalàna ihany koa amin'ny famoahana ny sehatra amin'ny fanararaotana ny mari-pamantarana marika. Mandra-pahatongan'izany, i Mr. Popov dia hanohy haka vola be noho ny baikon'ny baikon'ny tompon'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny sehatr'ireo vondrona misy azy 31 eo ambanin'ny rafitra.
Ankehitriny dia fantatrao momba ity spam rosiana ity ianao; Azonareo atao soso-kevitra ny hanala ny spam referendum amin'ny Google Analytics raha tsy esorina ao amin'ny lisitry ny kaontinao. Ampidiro fotsiny ny domy hulfingtonpost.com, darodar.com ary ireo sehatra hafa rehetra amin'ny lisitra. Ny famerana fisivana dia azo ampiharina amin'ny tanjona mitovy ihany koa Source .